Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji belata glycogen? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Oge Glycogen depletion - otu esi ekpebi
Oge Glycogen depletion - otu esi ekpebi
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe iji belata glycogen?
Azịza niile (9) ImejuglycogenAgaghị catabolized tupu 70-80% nkemmebinke akwaraglycogen. Nke ahụ nwere ikenara2 gaa na 4 awa, dabere na ngụkọta ngwongwo akwara, ike na ụdị mmega ahụ.
Otu esi abanye Ketosis Ngwa. Ekwere nkwa n'okpuru awa 24. Ise hacks dị mfe.
N'ime afọ ole na ole gara aga, nri ndị na-eme ketogenic ejiriwo oké ifufe mee ka ndị ọrụ ahụike na ahụike dị elu. N'ihi gịnị? N'ihi na ha na-ekwe nkwa ọnwụ ngwa ngwa na ike dị egwu. Iji kwuo banyere uru ahụike ndị ọzọ dị ka ahụike obi ka mma! N'ụzọ dị mwute, ịbanye na ketosis nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị oke mgbu n'olu.
Ma eleghị anya ọ bụ ya mere na ọtụtụ ndị chọrọ ịhapụ ihe na-ezere ya. Abụ m otu n'ime ndị ahụ, nwa nwoke, ị ga-ekwe ka akpọnwụ gị. N'isiokwu a, m ga-egosi gị otu ị ga-esi gbanye igwe metabolic gị ma nweta ketosis ngwa ngwa.
Ndewonu! Abụ m onye guzobere na onye isi oche nke ọrụ nwere ike yana onye edemede nke Ultimate Energy Crash Course, nduzi kachasị na-enyere ndị mmadụ aka ịkwalite usoro ndu ha ma melite ike ha, n'isiokwu a anyị gafere usoro ise ị ga - ewe iji nweta Get Banye Ketosis Ngwa! Ọ bụrụ na ị na-ekiri isiokwu a, echere m na ị maraworị ihe ketosis bụ na ị maara na iji banye ọnọdụ ketogenic, ịkwesịrị ịnọ na nri dị obere ala. Mgbe anyị nọ na kososis, ọtụtụ n'ime anyị na-enweta ike dị egwu na ketosis nwere ọtụtụ uru ahụike. Ketosis nwere ike ịbụ nnukwu ọrụ.
Ọ na-ewe oge maka ahụ gị ịgbanwe site na iji carbohydrates maka ike iji iji abụba eme ihe maka ike. N'oge mgbanwe ahụ, ike gwụrụ gị, dịkwa gị mfe. Otú ọ dị, ọ dabara nke ọma, e nwere ụzọ dị mma anyị nwere ike isi nyere aka nweta ngwa ngwa ngwa ngwa.
Nzọụkwụ otu: rie obere obere carbohydrates. Nzọụkwụ mbụ iji banye na ngwa ngwa ngwa ngwa bụ ihe ọ ga-apụta n'okpuru nri zuru oke nke ketogenic. Nwere ike iche nke a dị ka a nkwadebe nzọụkwụ.
Ha na-ekpo ọkụ n’igwe gị tupu ị gbalite ihe ọ bụla! Ya mere, gịnị ka ị ga-eme? -Carbohydrate Diet Tupu ịbuso nri zuru ezu nke Ketogenic Nke a ga - enyere gị aka jiri nwayọọ nwayọọ belata ụlọ ahịa glycogen gị ka mgbanwe gị dị nwayọ ma nwayọ. Ọ bụrụ na m na-eme atụmatụ n'onwe m ịkọwapụta, anaghị m agbapụ nzọụkwụ a n'ihi na ọ na-enyere m aka nke ukwuu. N'eziokwu, m eriworị nri obere obere carb ọtụtụ oge, yabụ ahụ m ejiri ya.
Yabụ ọ bụrụ na m bepụ obere obere carbohydrates, ọ gaghị abụ nnukwu ihe ijuanya na sistem m. Ka o sina dị, isi ihe dị ebe a bụ igbutu nri carb gị ka ị ghara mejupụta ụlọ ahịa glycogen gị kpamkpam. Rie ego nke ga - eme ka ụlọ glycogen gị belata nwayọ.
N'ụzọ ahụ, mgbe ị zuru oke ketogenic, ị gaghị echere ogologo oge ahụ ka ha gwụ. Nzọụkwụ nke abụọ iji banye ketosis ngwa ngwa bụ mmega ahụ! Ma, ọ bụghị mmega ahụ ọ bụla. Ikwesiri ime mgbatị dị elu dị ka ọzụzụ nke etiti oge dị elu, nke a makwaara dị ka HIIT.
Ma ebe ọ bụ na mmega ahụ siri ike nwere ike ibute shuga shuga gị na mbụ, ị ga-achọ ịgbaso obere oge, obere obi ike.Ọ ga-abụ ụdị ọrụ mgbatị ahụ nke na-adịghị ala ala. Nke a na - enyere ahụ gị aka iji ụlọ glycogen na - echekwa ngwa ngwa ma mechaa nweta ngwa ngwa ngwa ngwa.
Mee nke a kwa ụbọchị ruo mgbe ị banyere ketosis. Ka m tinyekwuo otu ihe mere mgbatị ahụ ga-eji dị oke irè - ọ bụrụ na ị na-eme ya oge niile, ọ ga-enye gị nnukwu mmụba nke ike nke ga - enyere gị aka ịlụ ọgụ ike ọgwụgwụ ọ bụla ị nwere ike inwe mgbe ị na - agbanwe na ketosis! nweta uru ahụike agbakwunyere agbatị dị ka ego! Nzọụkwụ atọ: hụrụ abụba n'anya. Anaghị m ekwu banyere ụdị ịhụnanya gị, ọ bụ ezie na anyị nọ na-arụ ọrụ nwere ike ịghọta mkpa ọ dị ịnabata ma hụ onwe gị n'anya n'ụzọ zuru oke.
Mana ọ bụrụ na ị nwere njikwa ịhụnanya na ịchọrọ ịchụpụ ha na ketosis, usoro a ga - enyere gị aka! Ugbu a, anyị abịarutela n’ihe ndị na-atọ anyị ụtọ. Ihe m chọrọ ikwu bụ abụba sitere n'okike nke nwere ike ime ka ọkwa ketones dị n'ọbara gị dịkwuo ukwuu. Abụba a bụ mmanụ na-anọpụ iche nke a na-akpọ mmanụ MCT.
M nnọọ n'anya a stof na m na-eche a anya agbam ume nke ike mgbe m na-eji ya; Ana m ewere ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nri ọ bụla m na-eri ma mgbe m gbalịrị ịbanye na kososis, m na-eri nri m! Mana obughi mmanu MCT nile ka eme. E nwere ụdị mmanụ MCT anọ. Nke mbụ bụ C12, nke abụọ bụ C10, mgbe ahụ C8 na akpatre C6.C12 anaghị arụ ọrụ iji mụbaa ketones gị.
C10 na-arụ ọrụ, mana ọ bụ ezigbo ọrụ. Na C6? Ọ dị mma na-agwụ ike ma nwee ike isi ike na afọ gị na-achọ inweta C8! Ma ọ bụ ngwakọta nke C8 na C10 ma ọ bụrụ na ịnweghị ike inweta C8 dị ọcha. Mana jide n'aka na ịgbalịsi ike maka C8 dị ọcha.
Dị ka akụkụ dị n'akụkụ, enwere ike ịchọta mmanụ MCT na mmanụ aki oyibo! Ugbu a, ọ bụ naanị mmanụ oyibo ka eji. Mmanụ anaghị arụ ọrụ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ, jiri ya na njikọ C8 na C10 maka obere enyemaka.
Laghachi na mmanụ MCT. Ka m tinye ịdọ aka na ntị: Mmanụ MCT nwere ike ibute oke iwe na afọ ọsịsa. Ya mere kpachara anya ma bido obere.
Ọ bụghị nsogbu gị afo ka ọ mara gị ahụ. Should ga-enwerịrị ike inweta nnukwu ego karịa oge na-enweghị nsogbu ọ bụla. Nzọụkwụ Nọmba Anọ: Gaa Exogenous Ọ bụghị ihe dị elu karịa mmanụ MCT, ị nwere ike ịga ketones dị oke.
igwe kwụ otu ebe maka ndị buru ibu
Ha adighi ka mmanu dika MCT mmanụ, ya mere ha nwere ike buru ihe ojoo. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye na ngwa ngwa ngwa ngwa, nke a bụ maka gị. Kedu ihe bụ ketones? Ọfọn, oke pụtara na ha si n'èzí ahụ gị ma ị maraworị ihe ha bụ.
Imirikiti ketones dị n'ụdị nnu BHB. Ọtụtụ n’ime ha dị mma. E nwere ọtụtụ ndị nrụpụta dị iche iche ka ị nwee ọtụtụ ịhọrọ.
Agbanyeghị, ka m tinye ịdọ aka na ntị ọsọ ọsọ. Nnukwu ketones na-atọ ụtọ nke ukwuu, yabụ ndị na-emepụta ihe na-agbakwụnye ya ọtụtụ isi ụtọ ma ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ya. Enwere m ike ikwu iji ketones kachasị arụ ọrụ ị nwere ike ịchọta.
Lelee ndepụta ihe ndị mejupụtara! Ugbu a ị nwere ike ịchọta ketones dị egwu na mmiri mmiri na ntụ ntụ. Họrọ nke kachasị gị mma. Nnukwu ketone supplementation bụ otu n'ime ụzọ kachasị dị irè iji banye ngwa ngwa ngwa ngwa, akụkụ kachasị mma bụ na ị ga-enweta uru na-eme ka ike gwụ gị ngwa ngwa.
Ọ bụrụ na ị bụ adventurous, maa ya a-agbalị! Nzọụkwụ ise: Ngwa ngwa. Nke ahụ bụ nzọụkwụ ikpeazụ m nwere maka gị taa; ọ kachasị dị oke njọ, mana ọ ga-akachasị arụ ọrụ. Nke ahụ na-ebu ọnụ.
Ikekwe ị maraworị ihe ibu ọnụ bụ. Mana achọrọ m ikwusi ike na mgbe ị na-ebu ọnụ, ị gaghị eri ihe ọ bụla ọzọ karịa mmiri, kọfị ojii na tii. Younweghị ike ịgbakwunye mmiri ara ehi ma ọ bụ shuga na kọfị gị ma ọ bụ tii.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-ebu ọnụ ruo ogologo oge, ịnwere ike ịgbakwunye obere nnu ma ọ bụ ofe na uto gị. Mgbe ị na-ebu ọnụ iji mee ka ketosis mee ngwa ngwa, ị ga-ebu ọnụ naanị ruo awa 24 ruo 48, ọtụtụ mmadụ na-achọkwa mmiri. Ebe ọ bụ na ị naghị eri carbohydrates, protein ma ọ bụ abụba ọ bụla, ị ga-abanye ketosis ngwa ngwa karịa nri dị ala-carbohydrate.
Mana ọ bụrụ n’ịchọghị ịme ọnụ-ọnụ zuru oke, mgbe ahụ i nwekwara ike ime ihe a na-akpọ abụba abụba. Lee ị na-eri mmiri, kọfị ojii na tii dịka ọ na-adịbu, kamakwa ị na-eri abụba. Anyị amaghị kpọmkwem otú nke a ga-esi emetụta ịbanye na kososis, mana ebe ọ bụ na ị naghị eri carbohydrates ọ bụla ma ọ bụ protein, ị gaghị egbochi gị.
Mana, dika oge niile, ahụ dị oke mgbagwoju anya ma ọ nwere ike inwe ụfọdụ mmetụta anyị na-amatabeghị nke ọma. Mana mgbe m na-eme atụmatụ ịbanye na ketosis, m na-ahọrọ ngwa ngwa abụba ngwa ngwa. Nke ahụ bụ n'ihi na ọbụlagodi ahụghị m ihe ọ bụla dị iche n'etiti ngwa ngwa mmiri na abụba dị ngwa maka inweta ketosis.
N'ezie, ọ dị m ka m nwere ike ịbanye na kososis ọbụlagodi site na ibu ọnụ na-eri mmanụ MCT! Ọ bụrụ na m gbasoo usoro niile n'isiokwu a, enwere m ike ịkọ oke n'ọtụtụ ọbara m n'otu ụbọchị. Enwere m ike ịsị na ọ naghị ewe ihe karịrị ụbọchị abụọ iji banye ketosis zuru oke. Ugbu a anyị niile dị iche na ọ nwere ike iwe ogologo oge, mana usoro ndị a ga-enyere aka.
Ugbu a, m ga-achọ itinye ihe ederede ngwa ngwa banyere ịlele ketosis gị, zere eriri ketone, tụọ ọkwa ketone na mmamịrị gị adịghị arụ ọrụ, ọ ga-aka mma ka ịchekwa ego gị ma tụọ ya site na mmetụta. Mana ọ bụrụ n 'ịchọrọ ụzọ a ga-esi kwubata ma ị banye ketosis, lee onwe gị ule ọbara. Nwere ike nweta ha ezigbo ọnụ ala ụbọchị ndị a ma dị ka ego ha nwekwara ike iji tụọ ọbara shuga gị n'ọbara.
Ma ọzọ, ị chọghị otu, ana m agba gị ume ka ị lelee m Ultimate Energy Crash Course. Ọ bụ ezigbo nduzi ga - enyere gị aka ime ka usoro ndụ gị gbanwee maka ahụike mmadụ na ike ya na ike gị. Naanị gaa na Activatedbody.com maka nnomi efu! I nwekwara ike pịa Pịa njikọ njikọ ahụ na nkọwa dị n'okpuru isiokwu a.
Ọ ga-akpọrọ gị gaa ebe ahụ. Daalụ maka ikiri. Enwere m obi ekele na ị mere ka m kpọọ onwe m n'ime ndụ gị iji nyere gị aka ịghọta ezigbo ikike gị, na iji belata ike m na-abawanye, ọ dị ka ụwa ọhụrụ! Obi dị m ezigbo ụtọ! Ọfọn, m ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị nwere otu ahụmahụ.
Ee ee, biko kọọrọ gị ahụmịhe gị site na ịza ajụjụ n'okpuru ma mee ka m mara otu o siri gaa! I nwekwara ike ịjụ m ajụjụ ọ bụla; M na-ekwe nkwa iji aka gị laghachikwute gị. Na otu ihe: Ọ bụrụ na-amasị gị nke a Ọ masịrị isiokwu ahụ, biko denye aha. M na-atụ anya ịkọrọ gị ihe ndị ọzọ dị ike karị.
Ka anyi megharia ezi ikike gi ọnụ. (egwu na-ada ụda)
Ogologo oge ole ka ọ ga-eji dochie ụlọ ahịa glycogen zuru ezu?
Ọ bụrụmmebi glycogenọ bụ naanị 40 mmol / kg wet wt na ọnụ ọgụgụ zuru oke nke carbohydrates dị elu na-eri nri ozugbo emega ahụ na oge nkeji oge 30,zuru glycogenmweghachi nwere ike ime mgbe 4 ma ọ bụ 5 gasịrịawa.Feb 10, 2018
Kedu otu ị si agba glycogen ọsọ ọsọ?
b) Itinye aka na mgbatị siri ike (ma ọ bụ ogologo oge) gaazuru ezuakwara nkeglycogen, nke nri null-carbohydrate na-esochi ruo awa 10-12, ga-etinye nrụgide ka ukwuu na ume ike metabolism. Ahụ ike na-arụ ọrụ ga-atụkwasịkwu obi na shuga shuga (nke imeju na-eweta) yana nke abụba ya.Jul 24, 2017
ịjụ bench russian ighikota
Kedu ka ị ga - esi mara ma glycogen agwụla?
Otu ugboroglycogenụlọ ahịa dịgbarụọ,nke giozu gwụrụ mmanụ ụgbọala nagịga-amalite inwe ike ọgwụgwụ.Nwere ike 22, 2018
(Tonda) - Ọrịa shuga bụ nsogbu na-arịwanye elu na mba ndị mepere emepe na mba ndị ka na-emepe emepe, e jikọtara ya na nsogbu ahụike na-adịte aka. Enwere ụdị ọrịa shuga abụọ, Type 1 na Type 2, mana ha abụọ enweela njikọ na enweghi ike ịchịkwa ogo glucose n'ọbara nke ọma. Ihe ederede a n’egosiputa ka adighi ako ihe obara obara obara si bia na ihe ndi n’emetuta nke anyi.
Iji ghọta otú njikwa glucose na-esi agahie, anyị ga-ebu ụzọ ghọta otu esi eme ka usoro dị mma nke mmekọrịta dị n'etiti glucose na hormone insulin dịrị. Glucose na-amịkọrọ nri anyị. Ọ bụ ihe dị mkpa na-enye ume maka mkpụrụ ndụ anyị.
Agbanyeghị, glucose aghaghị ibu ụzọ banye na cell tupu enwere ike iji ya. Na ịgafe nke ọma na akpụkpọ ahụ, ọ chọrọ enyemaka site na insulin hormone. A na - ewepụta insulin n'ime ọbara site na mkpụrụ ndụ pụrụ iche na pancreas.
Enwere ike ile ya anya dị ka igodo na-emeghe cell ma na-enye ohere ka glucose banye n'ime. Insulin na aru aru nke sel na - arụkọ ọrụ ma na - eme ka ọ bụrụ nke pere mpe maka glucose. Ozugbo glucose dị n'ime, enwere ike ịkụtu ya ma jiri ya mee ihe maka ike ike supplynọgide na-enye ike nke sel yana anaghị eji glucose eme ihe ngwa ngwa. (Drum roll) Mgbe ọkwa shuga dị n'ọbara dị elu, ahụ na-echekwa ụfọdụ glucose ahụ maka ojiji ọzọ.
A na - amịnye ya (n’echeghị anya) n’imejuju, ebe ọ gbanwere glycogen, ụdị glucose echekwara. Ọ na-etinyekwa obi n’ime sel ndị nwere abụba. Insulin, n’onwe ya, bụ mmiri ọgwụ nke na-achịkwa usoro a.
Dị ka sel ndị ọzọ, imeju, akwara, na mkpụrụ ndụ ndị nwere abụba apụghị iburu glucose n'ebughị ụzọ jiri insulin na-emekọrịta ihe. Insulin na-achịkwa oke glucose echekwara. Ka anyị leba anya na insulin na glucose nọ n'ọrụ. (Drum roll) Mgbe anyị riri nri, ọ̀tụ̀tụ̀ shuga dị n'ọbara anyị na-arị elu.
Mkpụrụ ndụ pụrụ iche na pancreas nwere mmetụta dị nro na mmanụ glucose, na, na nzaghachi, zobere insulin karịa n'ọbara. Insdị insulin na-abawanye na-eduga na mmekọrịta siri ike na membranes cell ma na-akwalite ntinye ike nke glucose n'ime sel. Igwe insulin dị elu na-akwalite nchekwa glucose dị ukwuu n'ime imeju, akwara na abụba.
Oke glucose dị n’ọbara na-ebelata ka shuga na-abanyezi n’ime sel nke ahụ. Pancreas, nke na - achọpụta mgbanwe a, na - ebelata oke insulin na - achọpụta ma na - ebute ngwa ngwa glucose oke ngwa ngwa. Mkpụrụ ọgwụ glucagon, nke pancreas na-ezobekwa, bụ ọrụ maka ịgbanwe glycogen echekwara n'ime imeju na azụ akwara n'ime glucose.
Nnukwu insulin na-ebelata ịhapụ glucagon n'ime ọbara, si otú a na-egbochi ịhapụ shuga echekwara. Agbanyeghị, mgbe ọkwa glucose dara, dịka mgbe onye ọrịa na-ebu ọnụ, insulin na-agbadata. Mgbe a na-ebelata ogo insulin, ịhapụzi glucagon.
Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na imeju ugbu a, na-akpali ntọhapụ nke glucose ma weghachite ọkwa shuga n'ọbara na nchekwa. Usoro a na-aga n'ihu na-enyere aka igbochi ọkwa shuga n'ọbara n'ime nchekwa. Ọbara shuga agaghị adị oke ala, nke na-egbochi ahụ ike ya ma ọ bụ na-adị oke oke, ihe ga-esi na ya pụta bụ nke anyị ga-eleba anya na ya n'isiokwu ahụ.
Ọ dịkwa mma ịmara na ọ bụ ezie na ọkwa insulin na-adaba na nzaghachi nke ogo shuga dị n'ọbara, ọ bụrụ na insulin na-adị mgbe niile na ahụ ike, mgbe ahụ mkpụrụ ndụ anyị agaghị enwe ike iburu glucose ma kwụsị ọrụ. Anyị chọrọ insulin iji bie ndụ. (Bell na-akụ) (Morse beeps) (Nnụnụ na-ebe ákwá)
Glycogen na-ebelata n'abali?
Kedu ihe na-emen'abalị? Mgbe ikeglycogenetoju agaghịzuru ezubudata n'abalị, ụbụrụ na-achọglycogendika mmanu ga-esi gbapu imejuglycogen. Ọ bụ ọsọ maka a abalị oge ngwa ngwazuru ezuumeji si Olee ihe enyemaka 90g nkeglycogennchekwa na 20g, n'ihi ụbụrụ ojiji 0.1 g / min glucose.Eprel 22, 2015
Ibu ọnụ ọ na-eme ka glycogen gbasiri ike?
Ibu Ọnụtupu mmega enwekwu abụba itinye n'ọrụ na lowers ọnụego nkenkwonkwo glycogen. Ebe ọ bụ na 24-hngwa ngwaỌzọkwadepletesumejiglycogen, anyị nwere mmasị na glucose homeostasis n'oge mmega ahụna-ebu ọnụ.
Kedu ihe na - eme mgbe glycogen gwụchara?
'Ọ bụrụ na ahụ gịna-agba ọsọnke echekwaraglycogen, Ọ ga-anwa igbari mkpụrụ ndụ abụba maka ikegịmkpa, 'Peng na-agbakwụnye. A na-akpọ usoro a gluconeogenesis, ma ọ bụ nhazi glucose site na isi mmalite. Nsogbu bụ na nke a na-ewe oge karịa ịtụgharịglycogen.Ọnwa Iri na Abụọ 12
Ibu ọnụ na-agba glycogen?
Ibu Ọnụtupu mmega enwekwu abụba itinye n'ọrụ na lowers ọnụego nke uru ahụglycogenmmebi. Ebe ọ bụ na 24-hngwa ngwana-egbochi umejiglycogen, anyị nwere mmasị na glucose homeostasis n'oge mmega ahụna-ebu ọnụ.
Sugar weghachi glycogen?
Tụkwasị na nke ahụ, a na-enweta ihe ndị na-enye carbohydrate n'ụzọ dị iche na ahụ mmadụ. Site na ịgbakwunye ha abụọglucosena fructose, anyịnwere ikenwere ikemejuputaumeji na akwaraglycogenechekwa na ngwa ngwa karịa ingestion nkeglucosenaanị.Jenụwarị 26, 2015
Ibu ọnụ ọ na-agwụ glycogen?
Ibu Ọnụtupu mmega enwekwu abụba itinye n'ọrụ na lowers ọnụego nke uru ahụmmebi glycogen. Ebe ọ bụ na 24-hngwa ngwaỌzọkwadepletesumejiglycogen, anyị nwere mmasị na glucose homeostasis n'oge mmega ahụna-ebu ọnụ.
Kedu ka ị ga - esi gbakee site na mmebi glycogen?
Iji jirichaa uru ahụglycogenIjuputa ogwu, odi nkpa ka iwere nri carbohydrate ozugbo emechara mgbatị ka o kwere mee. Na-a theụkarị carbohydrate ugboro ugboro, dị ka minit 30 ọ bụla, ma nye ihe dịka 1,2 ruo 1.5 g nke carbohydrate · kg-1. 1ahụ wt · h-1. 1.Ọnwa Itolu 1, 2004
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbanye mmanụ mgbe glycogen depletion gasịrị?
Mgbe ahụ nwere mmebi nke ụlọ ahịa, ọ ga-ewe ihe dị ka awa 24 iji gbanye mmanu (yabụ, ịmịnye nri, gbarie, ma gbanwee nri n'ime glycogen). Aghọtara na nri nwere carb ga-enyere aka mejupụta ụlọ ahịa kachasị nke ọma.
Kedu mgbe ahụ glycogen na-agwụ?
Mgbe ahụ kwagidere ụlọ glycogen zuru ezu ma ọ bụ ngụkọta zuru oke, ọ ga-ewe ihe dị ka awa 24 maka ahụ iji rie nri zuru oke nke kwesịrị ịdị n'ụkpụrụ kwesịrị ekwesị, yana ịgbanwe carbohydrates ingest n'ime glycogen.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ịme ọtụtụ glycogen depletion na - agba ọsọ?
Ọ bụrụ na ịmee ọtụtụ glycogen depleted na-agba ọsọ na ọzụzụ ma kpachara anya iji mejupụta carbohydrates gị mgbe ị gbasịrị, ị nwere ike ibibi ụlọ ahịa glycogen gị nke ukwuu. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ịme ọtụtụ glycogen depletion na-agba ọsọ ga-anọgide na-atọgbọ tank gị ruo mgbe ọ nweghị ihe ọ bụla fọdụrụ inye.